KISMAAYO.com – Al-Shabaab oo xaqiijisay dilka Ibraahim Afghan & Macallin Burhaan
Al-Shabaab oo xaqiijisay dilka Ibraahim Afghan & Macallin Burhaan
June 29, 2013	Kooxda Al-Shabaab ayaa maanta xaqiijisay inay dishay labo ka mid ahaa hoggaamiyayaasheeda – Ibraahim Xaaji Jaamac (Al-Afghan) iyo Sheekh Cabdixamiid Xaashi oo ku magac-dheeraa Macallin Burhaan.
Afhayeenka dagaalyahannada Al-Shabaab, Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay ku dhinteen is-rasaaseyn ka dhacday magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose kaddib markii ay la dagaallameen dagaalyahanno loo diray inay soo qabtaan.
Sheekh Muscab wuxuu sheegay in la rabay oo kaliya in la soo qabto labada hoggaamiye, kaddibna maxkamad la soo taago, balse ay ku naf-waayeen iska horimaad dhex maray iyaga iyo ciidankii loo diray inay soo xiraan.Wuxuu Eebbe uga baryay inuu siiyo naxariistiisa.
Wuxuu beeniyay in Ibraahim Xaaji Jaamac (Al-Afghan) iyo Sheekh Cabdixamiid Xaashi la dilay iyagoo ku jira xabsi ku yaalla Baraawe, balse ay ku dhinteen iska horimaad ay la galeen ciidankii loo diray inay soo qabtaan.
Afhayeenka wuxuu kaloo ka warramay howlgal kale oo ay ka sameeyeen deegaanka Raama-Caddey ee gobolka Baay, kaas oo la rabay in lagu soo xiro saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo eedo la xiriira kala qeybinta midnimada kooxda loo haystay, balse uu iska horimaad dhex maray eedeysanayaashii la doonayay in la qabto iyo ciidankii ku lugta lahaa howlgalka, halkaasna uu ku geeriyooday mid ka mid ah ciidankii wax qaban lahaa.
Raggan dambe ayuu sheegay inay ku guuleysteen inay baxsadaan.
Iska horimaadka ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu horreeyay ee ka dhex dhasha dagaalyahannada Al-Shabaab tan iyo markii ay billaabeen dagaalka ay kula jiraan dowladda sanadii 2006, sida ay sheegtay BBC News.
Habeenkii June 22, Sheekh Xasan Daahir Aweys, oo ah aasaasihii urur-diimeedkii Xisbul Islaam ayaa doon uga baxsaday magaalada Baraawe asaga iyo dhowr ka mid ah taageerayaashiisa, sida uu qoray bogga Somalimemo, ee taageera Al-Shabaab.
Sheekh Xasan Daahir ayaa maanta loo duuliyay magaalada Muqdisho, isagoo laga soo qaaday magaalada Cadaado oo uu ku sugnaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay tan iyo markii uu ka baxsaday Baraawe.
Isla markii uu ka soo degay diyaaraddii sidday, waxaa ammaankiisa la wareegay ciidanka nabad-sugidda qaranka Soomaaliya.
Weli si rasmi ah uma cadda waxa ay dowladda Soomaaliya ka damacsan tahay arrinta Sheekh Xasan Daahir, iyo in loo oggolaan doono inuu dalka ka dhoofo iyo in kale.
Burhaan Kikuyu oo loo haysto dilka nin dhallinyaro ah Al-Shabaab: Waan sii wadeynaa dilka siyaasiyiinta Ragga loo qabtay dilka Ugaas Xuseen Hafow ma ahan kuwa dilka geystay Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda dilka madaxii ammaanka ee Kismaayo Faarax Macallin oo doonaya in la shaaciyo aqoonsiga tuhmaneyaasha No comments
Republik Kongo pun terseret arus embargo dan inflasi
Wahai angin, sadarkan para perompak Somalia yang membajak kapalnya di masa lalu
#Somalia Yemen: Yemen: Factsheet, April 2016 [EN/AR] https://t.co/DtKfhAD46j #crisismanagement
#Somalia Yemen: New Arrivals in Yemen Comparison 2013 - 2016 (As of 30 April 2016) [EN/AR] https://t.co/nQWT8CuW7M #crisismanagement